စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးကင်မရာပါသောစမတ်ဖုန်း | Gadget သတင်း
စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးကင်မရာပါသောစမတ်ဖုန်း ၁၀ လုံး
Villamandos | | မိုဘိုင်း
ဒီနေ့ စမတ်ဖုန်းတွေဟာသူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးနီးပါးမှာတိုးတက်လာပေမယ့်ကင်မရာမှာပါ။ ကင်မရာဖြင့်ပထမဆုံးစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာသည့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များသည် megapixels တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုဖြင့်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးယနေ့မမျှော်လင့်ဘဲကန့်သတ်ချက်များအထိတိုးတက်လာသည်။ အလွန်များပြားသောပမာဏသည် megapixels နှင့်စျေးကွက်ရှိကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကင်မရာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူဖြစ်သည်။
ဤတိုးတက်မှုကြောင့်မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆို၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းစက်ဖြင့်ကြီးမားသောအရည်အသွေးရှိသောဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ယူနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာကိုပြောင်းလဲရန်စဉ်းစားနေပြီးကင်မရာကောင်းတစ်လုံးကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကယနေ့ပြုလုပ်ခဲ့သောဤစာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကသင့်ကိုတင်ပြသည် စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးကင်မရာပါသောစမတ်ဖုန်း ၁၀ ခု, ဒါဆိုနောက်ပိုင်းမှာသင်ဟာအချက်အလက်အားလုံးနဲ့အတူရွေးလို့ရနိုင်ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့စျေးနှုန်းကဲ့သို့သောအခြားအဆုံးအဖြတ်ပေးသောအချက်များကပြေလည်သွားမှာဖြစ်သည်။
2 LG က G4
3 Samsung ရဲ့ Galaxy S6
4 Samsung ၏ Galaxy Note ကို 4
5 Sony Xperia Z3
6 ကို Nexus 6
7 LG က G3
8 ဟွာဝေး P8
9 Samsung Galaxy Note 3
10 Sony Xperia Z2
11 Samsung ရဲ့ Galaxy S5
အသုံးပြုသူများစွာကကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံတစ်ခုရရှိရန် megapixel အရေအတွက်သည်အရေးအကြီးဆုံးလက္ခဏာဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသော်လည်းဤကိစ္စသည်မဟုတ်ပါ။။ ဥပမာအားဖြင့်စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သောအမြင့်ဆုံး pixels ပမာဏရှိသောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အတော်များများသည်စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးကင်မရာရှိသောစမတ်ဖုန်း ၁၀ ခု၏စာရင်းတွင်မနေရာချထားနိုင်ပါ။
များစွာသော megapixels များအပြင်၊ မိုဘိုင်းပစ္စည်းကိုတပ်ဆင်ထားရန်အရေးကြီးသည် ကောင်းသောအာရုံခံကိရိယာကောင်း၊ မှန်ဘီလူးကောင်းကောင်းသို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးပုံရိပ်ရိုက်ကူးခြင်း.
စမတ်ဖုန်းရွေးချယ်ရာတွင်ကင်မရာ၏အများဆုံး aperture ကိုကြည့်ရန်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒီ parameter သည်အာရုံခံထဲသို့ဝင်နိုင်သောအလင်းပမာဏကိုဖော်ပြသည်။ ကျနော်တို့f/ 2.0 သို့မဟုတ် f2 ကင်မရာကောင်းတစ်ခုအကြောင်းပြောဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှတတ်နိုင်သမျှဖြစ်သင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်သင့်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပို၍ များသော်လည်းအဓိကအချက်များမှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ 41 megapixel (သို့) 82 megapixel ကင်မရာသည် 8 megapixel ကင်မရာထက်ကောင်းမွန်သော sensor နှင့်ကောင်းမွန်သောမှန်ဘီလူးများပါရှိနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။
ယနေ့တိုင်အောင်၏အခနျး LG က G4ကျနော်တို့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် ကျနော်တို့စက်ကိုပြုပြန်လည်သုံးသပ် ဒါဟာစျေးကွက်ချွတ်နီးပါးဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့် 16 megapixel အာရုံခံကိရိယာ၊f/ 1.8 ၏ focal aperture နှင့်တည်ငြိမ်သော OIS 2.0 ပုံရိပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောအရည်အသွေးရှိသောပုံများကိုရရှိနိုင်သည်။ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို။
LG G4 ကင်မရာသည်နေ့ခင်းဘက်၌သာမကအလွန်မှောင်မိုက်သောအခြေအနေများတွင်ကြီးမားသောပုံရိပ်ရရှိနိုင်သည်။ ပြောခဲ့ပြီးသောအချက်များအရ၎င်းသည်၎င်းတွင်လေဆာရောင်ခြည်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားပြီးအရောင်ထူးထူးခြားခြားတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုထားသည်ကိုချက်ချင်းသတိပြုရမည်။
ထို့အပြင်၎င်း G4 ကင်မရာ၏ကြီးမားသောအရည်အသွေးကိုဖော်ပြရန်၎င်းသည်ပုံများကို RAW format ဖြင့်သိမ်းဆည်းရန်၊ ဗီဒီယိုကို 4K format ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ဆင့်သွားလိုသူများအတွက် manual mode တွင်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ တစ်တုံ့ပြန်မှုကင်မရာ။
Samsung ရဲ့ Galaxy S6
ကင်မရာ၏အရည်အသွေး Samsung ရဲ့ Galaxy S6 ကြီးမားတယ် Galaxy S6 Eedge မှာမြင်တွေ့ရပြီးပါပြီ။ 16 megapixel အဓိကအာရုံခံကိရိယာနှင့်f/ 1.9 နှစ်ခုလုံးဆိပ်ကမ်း၏ focal aperture တို့ပါဝင်သည် ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို၊ အလင်းရောင်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေအလင်းရောင်ဖြစ်စေမည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုရိုက်ကူးခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်.
ရှေ့ကင်မရာက ၅ megapixel အာရုံခံကိရိယာနဲ့တန်းတူဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ selfies တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရည်အသွေးတွေကိုယူဆောင်သွားမှာပါ။
Samsung Galaxy S6 နှင့် Samsung Galaxy S6 အစွန်းနှစ်ခုလုံး၏ကင်မရာများသည် Android လောကသို့ရောက်သောအခါစျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
Samsung ၏ Galaxy Note ကို 4
Samsung ၏ Galaxy Note သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကင်မရာကိုအမြဲတမ်းဝါကြွားနေပြီး၊ Galaxy Note4သည်ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါ။ တစ်အာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူ megapixels အရေအတွက်နှင့် Galaxy S6 ကဲ့သို့တူညီသောပမာဏသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဤအရည်အသွေးနှင့်အတူတူအရည်အသွေးမဖော်ပြသော်လည်းအလွန်နီးကပ်သည်.
အကယ်၍ သင်သည် Galaxy Note4ကင်မရာနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များပိုမိုလိုအပ်ပါက၎င်းတွင် Sony IMX240 အာရုံခံကိရိယာနှင့် OIS Smart optical stabilizer ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
သေချာပါတယ် ဆိုနီသည်ဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးကင်မရာထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည် ပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့သူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်တွေဟာအရည်အသွေးမြင့်ကင်မရာတွေအတွက်ထင်ရှားပေါ်လွင်နေတာလဲ။ ဒီမှာ က Xperia Z3စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးကင်မရာရှိသည်ဟုလူအများကဆိုကြသည်၊ အရွယ်အစားမှာ ၁ / ၂၃ လက်မရှိပြီး Exmor RS image sensor ကိုတွေ့ရပြီး၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောရုပ်ပုံများကိုသေချာစေသည့် 1 megapixels ရှိသည်။
ထို့အပြင်ဂျပန်ကုမ္ပဏီမှဤ terminal သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကင်မရာနှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားပြီးအလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောပုံရိပ်များစွာကိုလုပ်ဆောင်ပေးသည်။ နောက်ဆုံးအထွ,်အထိပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် IP67 ၏လက်မှတ်သည်၎င်းကိုအဆုံးသတ်စေပြီးရေစိုခံစေခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေကူးဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကို Nexus 6
El ကို Nexus6၎င်းသည် Google မှစျေးကွက်သို့ဖြန့်ချိသည့်နောက်ဆုံးပေါ်မိုဘိုင်းကိရိယာဖြစ်သည်။ Motorola မှထုတ်လုပ်သည် 13-megapixel ကင်မရာသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နိမ့်သောဆူညံသံနှင့်ကောင်းမွန်သောရုပ်ပုံများကိုဖမ်းယူပေးနိုင်သည်.
သံသယအရှိဆုံးအနေနဲ့၊ ဒီ Nexus ဟာကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စမတ်ဖုန်းဖြစ်တယ်၊ သူ့ရဲ့အရွယ်အစား၊ ဘက်ထရီသက်တမ်းနဲ့လည်ပတ်မှုစနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲငါစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ယုံကြည်တဲ့ကင်မရာကြောင့် Samsung, Sony သို့မဟုတ် LG ထုတ်ကုန်များနှင့်အချို့သောရှုထောင့်များတွင်ပင်ကျော်လွန်သည်။ သူတို့ကို။
LG G4 သည်လက်ရှိဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးကင်မရာပါ ၀ င်သည့်ဆိပ်ကမ်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ LG က G3၎င်းသည်နောက်ကွယ်မှမဝေးပါ။ အရည်အသွေးမြင့်ကင်မရာကိုပေးသည်။
con 13 megapixels, dual LED flash နှင့် optical image stabilizerဒီစမတ်ဖုန်းကိုစျေးကွက်ထဲမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပေမယ့်သူ့ရဲ့အရည်အသွေးကောင်းတဲ့အတွက်ဒီစာရင်းထဲမှာဆက်ရှိနေဆဲပါ။ LG G2 မှာကောင်းမွန်တဲ့ကင်မရာရှိပြီးကင်မရာမှာပုံရိပ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
El ဟွာဝေး P8 ၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်အချိန်တိုတိုအတွင်းရှိသော်လည်းထူးခြားသောကင်မရာနှစ်လုံးကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်၎င်းစာရင်းတွင်ခိုးယူနိုင်ခဲ့သည်။ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူသည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များတွင်တိုးတက်မှုများကြောင့်အဓိကအားဖြင့်ကြီးထွားလာသည်။ အကြီးမားဆုံးတိုးတက်မှုတစ်ခုမှာကင်မရာများတွင်ဖြစ်သည်။
ဒီ P8 တွင်တစ် ဦး mount ၁၃ မီဂါပစ်ဇယ်လ်နောက်ကင်မရာသည်ရွေးချယ်စရာများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များအပြည့်ရှိပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကြီးမားသောအရည်အသွေးပုံရိပ်များကိုပေးစွမ်းသည်။ terminal ၏ရှေ့ဖက်တွင် 8 megapixel ကင်မရာကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရည်အသွေးမြင့်သော selfies နှင့် iota အရည်အသွေးမဆုံးရှုံးသော group selfies များကိုပင်ရိုက်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်။
Samsung ကစတင်မိတ်ဆက်ကတည်းကကြာပြီပေမယ့် Galaxy Note ကို3ပြီးတော့ G alaxy Note5အသစ်ရဲ့တင်ဆက်မှုတံခါးကိုရောက်နေတယ်၊ ​​ဒီ terminal ကစျေးကွက်ထဲမှာအချိန်နည်းပါးမှုနှင့်အတူမော်ဒယ်များ၏အထက်တွင်အမြဲရှိနေသောကင်မရာကြောင့်ဤစာရင်းထဲသို့ခိုးဝင်သွားသည်။
သေချာပါတယ် ဤ Note3၏ကင်မရာ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးသည်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမည်သည့်အခါ၌မဆိုရရှိသောပြတ်သားပြီးသတ်မှတ်ထားသောပုံများဖြစ်သည်။ အာရုံခံကိရိယာ၏အရွယ်အစားသည်ယနေ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နည်းနည်းခေတ်နောက်ကျသော်လည်းမည်ကဲ့သို့တိုင်းတာရမည်ကိုသိရှိသေးသည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကရယ်စရာကောင်းသောဈေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ကင်မရာဖြင့်အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်လိုပါကဤ Galaxy Note3သည်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
Xperia Z3 ကိစ္စတွင် Sony က Sony သည်အကောင်းဆုံးကင်မရာထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ထိုအတွေ့အကြုံကိုစမတ်ဖုန်းများသို့ယူဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ မိတ္တူအမြောက်အများရှိသော်လည်း၊ က Xperia Z2 အထင်ရှားဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါကအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာစျေးကွက်အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့် ၎င်း၏½.20.7” sensor နှင့်f/3၏ aperture ပါ ၀ င်သည့်၎င်း၏ 2.0-megapixel ကင်မရာသည်စျေးကွက်ထဲရှိအကောင်းဆုံးကင်မရာများ၏အမြင့်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။။ ထို့အပြင်၎င်း၏ပုံရိပ်အပြောင်းအလဲသည်ထူးခြားသောရလဒ်များကိုပေးစွမ်းခြင်းထက်မကပါ။
Galaxy Note3ကဲ့သို့ပင်၊ Xperia Z2 သည်အလွန်နည်းပါးသောငွေကြေးအတွက်သာလွန်ကောင်းမွန်သောကင်မရာဖြင့်အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။
Samsung ရဲ့ Galaxy S5
ဒီစာရင်းကိုပိတ်ဖို့ကျနော်တို့ရှာပါ Samsung ရဲ့ Galaxy S5 16 megapixel ကင်မရာနဲ့ပြီးတော့ ပြီးပြည့်စုံသောအာရုံခံကိရိယာအရွယ်အစား (၁ / ၂.၆ လက်မ)ပုံရိပ်အပြောင်းအလဲထက်မကသောအပြင်။
Samsung သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကင်မရာဖြင့်စျေးကွက်တွင်အမြဲတမ်းမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များရှိခဲ့ပြီး၊ Galaxy S5 သည်ဤဥပမာ၏ထင်ရှားသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထင်မြင်ချက်အရ၊ စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးကင်မရာရှိသောစမတ်ဖုန်းကဘာလဲ။။ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုဤစာမူတွင်မှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည့်လူမှုကွန်ယက်များမှမှတ်ချက်ရယူရန်နေရာချပေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးကင်မရာပါသောစမတ်ဖုန်း ၁၀ လုံး
ခေါင်းစဉ်ကိုပြောင်းပါ။ စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးကင်မရာပါသော ANDROIT စမတ်ဖုန်း။
ဘာလို့လဲဆိုတော့အိုင်ဖုန်းကိုမထည့်ဘဲ၊ အလင်းရောင်အကြောင်းမေ့မထားဘဲ (ဒီနေရာမှာသင်ထည့်ခဲ့တဲ့ကင်မရာတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့ကင်မရာယူဆောင်လာတယ်၊ ဟောင်းနေတာ) သင်ဟာစာမူကိုခေါင်းစဉ်တပ်လို့မရဘူး။
ဟိုဆေး၊ အကယ်လို့ iPhone6ထွက်မလာရင်အဲဒါကိုမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ငါစဉ်းစားပြီးစဉ်းစားမိလို့ဖြစ်တယ်။
Lumia နှင့် ပတ်သက်၍ မူအချို့တွင်အလွန်ကောင်းသောကင်မရာရှိသော်လည်းဤဆောင်းပါးတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်ကင်မရာများ၏အဆင့်တွင်မလွယ်ကူပါ။ ၎င်းတို့သည်လက်ခံနိုင်သောအရည်အသွေးကိုပေးကောင်းပေးနိုင်သော်လည်းများသောအားဖြင့်၎င်းတို့တွင်အင်္ဂါရပ်များနှင့်ရွေးချယ်စရာများမရှိကြပါ။
ငါ့ကိုစာမဖတ်တဲ့အတွက်အရမ်းစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတယ်။
ဒီစာရင်းထဲမှာမပါ ၀ င်တဲ့ iPhone6မှာအရှက်ကွဲခြင်း။ ဒီကင်လုပ်ခိုင်းရေးသားခဲ့သည်သူကိုတစ် ဦး ညံ့ android ။
သင်ထားသည့်အရာအားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်သော Lumia အတော်များများကိုသင်ထားခဲ့ပါ။
Lumia 1020, 41 mpxl အပြင် pureview နည်းပညာအပြင်သင့်နှိုင်းယှဉ်မှုအားလုံး၏အထက်တွင်ရှိသည်။
ဒါ့အပြင်အတန်ငယ်ဟောင်းပေမယ့် lumia 925 ...
ဒီဟာကို doldrums မှာရှိတဲ့ Samsung ကလိမ်းပေးတယ်
ကြည့်ကြရအောင်။ iPhone6ကင်မရာကကောင်းပေမယ့်ပုံဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ၊ ဘယ်လောက်ပဲပြတ်နေပါစေ 8mpx ရှိသေးတယ်။ 8mpx ရှိတာကြောင့်ဒီအကောင့်ကိုထည့်သွင်းမစဉ်းစားတဲ့လူတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ကင်မရာပါ အကယ်၍ ကလေးငယ်သည် Android ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါကသူသိသည့်အကြောင်းကိုရေးသားခွင့်ပြုပါ။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ် Samsung နှင့်မတူကွဲပြားမှုများကိုဖော်ပြရန် iPhone အကြောင်းရေးသားရန်တစ်စုံတစ်ယောက်အားတောင်းဆိုခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
Simon Bad ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး Samsung ကိုရောင်းသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်သန့်ရှင်းသောအမှိုက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုလေ့လာသုံးသပ်သူ (သို့) ကျွမ်းကျင်သူနှစ် ဦး အားကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးဖတ်ခဲ့စဉ်တွင်မည်သူမျှမရှာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူသည်ဘက်မလိုက်သောသတင်းအချက်အလက်မဟုတ်ဘဲစျေးပေါသောကြော်ငြာဖြစ်သည်။
Simon Bad အားပြန်ပြောပါ
ငါ့မှာ Mi4 ရှိတယ်။ 13 mpx အာရုံခံကိရိယာနဲ့ 1.8f / p aperture ရှိတယ်။ သင်ဘာလို့စာရင်းထဲမထည့်တာလဲဆိုတာကိုငါနားမလည်ဘူး၊ အဲဒါကိုတစ်နှစ်နီးပါးယူပြီး s5 မှလာသည်။ လူတိုင်းဓာတ်ပုံရိုက်အရည်အသွေးဖြတ်သန်းနှင့်သူတို့ကပင်ဖော်ပြရန်မစီရင်ကြပြီမဟုတ်။
ဆိုလိုတာက၊ သင်သည် Galaxy S5 ၏ကင်မရာကိုထည့်ပြီး iPhone6ကိုမထည့်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်မျက်စိကန်းသည်ဖြစ်စေ၊ iPhone6ကိုတစ်ခါမှမစမ်းသပ်ဖူးပါ။ သက်သေပြရန် YouTube ၌ဗီဒီယို ၁၀၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ iPhone 100 နှင့်အတူ S5 ၏ camera နှင့်အမှန်တရားဒါဟာအများကြီးသာလွန်သည်, ငါစာရင်းနှင့်အတူသဘောမတူဘူးနှင့်ခေါင်းစဉ်ပိုကောင်းပြောင်းလဲသွားလျှင်, သူတို့သည်အကောင်းဆုံး android ကင်မရာများဖြစ်ကြပြီးငါ့မိတ်ဆွေမျက်စိမမြင်စေဘူး
Nexus က lumia 930 ထက်ပိုကောင်းတဲ့ကင်မရာပါ။
Lumia တွင်စျေးကွက်ရှိစမတ်ဖုန်းများထက်ကင်မရာတွင်ရွေးချယ်စရာများပိုမိုများပြားသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် Lumia 640 XL ရှိသည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တွင် Galaxy S5 ရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ Lumia သည်ဤစာရင်းတွင်ပါသူအားလုံးကိုသတ်ကြောင်းပြောပြပါရစေ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်စမတ်ဖုန်းများအကြောင်းပြောနေသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုပြောသောအခါ၎င်းကို "အကောင်းဆုံးကင်မရာဖြင့်အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း ၁၀ လုံး" ဟုခေါ်ဆိုလိမ့်မည်ဆိုသောဆောင်းပါးတပုဒ်တွင်အပိတ်မခံပါနှင့်၊ အကြောင်းမှာသင်သည်ဤသို့ရေးသားခြင်းဖြင့်သင်မည်သည့်အရာကိုရေးသည်ကိုပင်မသိကြောင်းပြခဲ့သည်။ သတ္တုတွင်း၏မတိုင်မီအားလုံးမှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်။ လူတိုင်းကမင်းလိုလူလိုပြောရင်ဒီဘလော့ဂ်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မဖတ်တော့ဘူး။
Windows 10 မှာ boot image ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ
Kindle Voyage, ဆွဲဆောင်မှုမရှိစျေးနှုန်းနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသော eReader